Soo dejisan WonderFox DVD Ripper 15 Pro iyo Speedy – Vessoft
WindowsCD & DVD & USB gaariCD & DVD-ga ripperWonderFox DVD Ripper
Bogga rasmiga ah: WonderFox DVD Ripper
WonderFox DVD Ripper – waa software si loo bedelo DVD-ga qaabka loo baahan yahay. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad DVD-ga u bedesho muuqaalka digital-ka ah ee tayo sare leh. WonderFox DVD Ripper wuxuu awood u leeyahay in uu ka-aamusho ilaalinta DVD-ka isagoo kaashanaya nuxurkiisa. Barnaamijku wuxuu awood u leeyahay inuu beddelo goobaha maqalka iyo fiidiyowga ee faylasha wax soo saarka iyo keydinta qaababka loogu talagalay isbeddelada xiga. WonderFox DVD Ripper wuxuu awoodaa in uu nuqul ka qaado DVD waqtiga wakhti gaaban.
Isku-beddelka DVD-ga ee fiidiyowga tayada sare leh
Dejinta muuqaalada audio iyo video ee faylasha la soo saaro
Bypass ka ilaalinta DVD ka soo horjeedka koobiyeynta
Soo dejisan WonderFox DVD Ripper
Faallo ku saabsan WonderFox DVD Ripper
WonderFox DVD Ripper Xirfadaha la xiriira
Tani waa software isku dhafan oo loogu talagalay maareynta marxaladaha kala duwan iyo adeegyada iyo sidoo kale kormeerida hawlaha shabakada iyo diskka.